[Review] Top 5 bếp nướng than hoa loại nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Top 5 bếp nướng than hoa loại nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 5 bếp nướng than hoa loại nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Ikhaya » Impahla yasendlini » [Review] Ama-grill amalahle aphezulu angu-5 aphezulu namuhla
Kwesinye isikhathi imindeni izohlela izoso zangaphandle ukuze zihlangane ndawonye, ​​zixoxe futhi zihleke. Ngalesi sikhathi, ukuba khona kwe-grill kudingekile. Phakathi kwabo, uhlobo oludumile noluthembekile lwe-grill i-grill yamalahle. Ngakho-ke ukuze ufunde kabanzi ngalolu hlobo lwe-grill, sicela ubheke isihloko esingezansi.
1 Iyini i-charcoal grill?
2 Ingabe kufanele ngisebenzise i-grill yamalahle?
3 Imibandela yokukhetha i-grill yamalahle efanele
4 Ama-grill amalahle aphezulu angu-5 aphezulu namuhla
4.1 1. Igrili yamalahle eyisikwele i-OEM BNV-01
4.2 2. I-OEM BNT-01 . I-Round Charcoal Grill
4.3 3. Najico grill BN300
4.4 4. Prota P016
4.5 5. Najico grill BN04
Iyini i-charcoal grill?
I-grill yamalahle yisitofu esisebenzisa amalahle ukupheka ukudla. Isakhiwo salesi sitofu sihlanganisa i-grill, i-burner lid, ithreyi yokushisa ene-grill padlock, umzimba wesitofu, i-burner, ithreyi ekhombisa ukushisa, i-potentiometer kanye noshintsho olunezibani zezinkomba.
Ukusebenzisa lolu hlobo lwe-grill akukongi nje kuphela isikhathi sokubhaka, kodwa futhi kusiza izimpahla zakho ezibhakiwe zibe mnandi futhi zigcine ukunambitheka okugcwele kwalezo zitsha.
Ingabe kufanele ngisebenzise i-grill yamalahle?
Sebenzisa izinhlobo i-grill yamalahle inezinzuzo eziningi. Ngakho-ke, lo mugqa womkhiqizo usathandwa kakhulu nanamuhla. Okokuqala nje, kufanele kushiwo ukuthi ukuphepha. Isizathu siwukuthi lolu hlobo lwesitofu lunegumbi elivuthayo eliklanywe ngesivalo esivaliwe nge-grease ehlukile kanye nethreyi yamanzi; qinisekisa ukuthi awukhiqizi intuthu negesi enobuthi, ngakho-ke ayiyingozi empilweni yabasebenzisi.
Bese, ukusebenzisa lolu hlobo lwesitofu kuzokusiza ukuthi uhlale uhlanzekile ekudleni kwakho. Uma ubhaka, isishisi asihogi intuthu kanye nomklamo wekhishi okuvumela ukuthi wenze ngokwezifiso izinga lokushisa lokubhaka, usize ukudla ukufeza ukunikela okulungile, usagcina ukunambitheka okunamafutha nombala omuhle.
Akukhona lokho kuphela, ukuze kube lula ukuhamba emapikinikini, amapikiniki, njll., ama-grill amanje aklanywe ngokuhlangene futhi aqinile. Izingxenye zesitofu zibuye zibe lula kakhulu ukuzihlanza nokuzicolisa ngaphambi nangemva kokusetshenziswa ngakunye.
Ikakhulukazi, uhlobo lwamanje lwesitofu samalahle lukhiqizwa emigqeni yesimanje enezingxenye ezenziwe ngensimbi engagqwali, ngakho-ke luhlala luqinile futhi lunekhwalithi enhle, olunempilo ende nokuqina ngokuhamba kwesikhathi.
Imibandela yokukhetha i-grill yamalahle efanele
Ngenxa yalezi zinzuzo ezingenhla, ukusetshenziswa kwezitofu zamalahle ezingenantuthu kuya ngokuya kuthandwa. Nokho, indlela yokukhetha eyodwa? i-grill yamalahle kufanelekile futhi kuphephile empilweni yabasebenzisi?
Ukuze wenze lokhu, lapho ukhetha i-grill yamalahle, kunamanothi ambalwa okufanele uwakhumbule, ikakhulukazi ngale ndlela elandelayo:
Kufanele ukhethe i-grill eyenziwe ngensimbi engagqwali engu-304 noma engu-430 ukuze uqinisekise ukudluliswa kokushisa okuhle, ukuhlanzeka okulula futhi okuhlala isikhathi eside.
Khetha isitofu samalahle ngokusekelwe kusayizi wesitofu. Ukuze ukhethe usayizi we-grill oyidingayo ngokusekelwe ezidingweni zakho kanye nenani labantu abasebenzisa leso sitofu njalo. Isibonelo, emindenini enabantu abangu-3-4, i-grill ene-circumference engaba ngu-50-90cm yanele.
Thenga isitofu samalahle ngefeni. Lokhu kuzosiza inqubo yokujikeleza komoya kangcono, amalahle ashise ngokuphumelelayo, angakhiqizi intuthu futhi kwenza kube lula ngawe ukulungisa ukushisa kwesitofu.
Khetha isitofu samalahle esinesisekelo sasekhishini futhi esingagoqwa: Lokhu kudingekile kakhulu uma umndeni wakho uvame ukuba namaphathi ezoso ngesikhathi sepikiniki kanye namapikiniki kude nasekhaya. Uma kwenzeka usebenzisa i-grill yasekhaya njalo, lokhu kuyinto engenzeka ngoba izitofu ezinjengalezi ngokuvamile zibiza kakhulu kodwa zenza kube lula kuwe ukuzigcina.
Khetha i-grill ngokusekelwe kubukhulu bethreyi lokubhaka. I-grill ene-tray yokubhaka inobukhulu obuphakathi, okuzosiza nakanjani ukunciphisa isimo sokushiswa kokudla lapho kubhaka kanye nokusiza ukudla ukuthi kungawi futhi kuwele ngaphansi kwekhishi.
Khetha i-grill ngokusekelwe kwezesekeli ezishintshayo: Ngesikhathi sokusetshenziswa, akunakugwenywa ukuthi lo mkhiqizo uzolimala kwesesekeli esisodwa noma ezimbalwa. Ngakho-ke, kufanele unikeze okuthandayo ukuthenga amamodeli ekhishi anezesekeli ezitholakala kalula ezithatha indawo.
Ama-grill amalahle aphezulu angu-5 aphezulu namuhla
Uma usazibuza ekukhetheni i-grill yamalahle Iluphi uhlobo olungcono kakhulu emndenini wakho namuhla, ungacabangela amamodeli wekhishi angu-5 ngezansi. Lawa wonke amamodeli emikhiqizo ethandwa kakhulu namuhla, aziswa kakhulu abathengi ngekhwalithi yawo, ukuphepha nokuqina lapho esetshenziswa.
1. Igrili yamalahle eyisikwele i-OEM BNV-01
I-OEM BNV-01 iyigrill eyenziwe eChina kodwa emigqeni yobuchwepheshe yaseYurophu. Ngakho-ke, lo mkhiqizo manje usuthandwa futhi ukhethwa abantu abaningi. Umkhiqizo unomklamo ohlanzekile onombala omuhle kakhulu omnyama.
Isitofu senziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu zensimbi, ngakho siqine kakhulu futhi siqinile. Akukhona lokho kuphela, le nto iphinde isize isitofu sibe nempilo ende, isikhathi eside kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Ikakhulukazi, i-OEM BNV-01 iphinde imbozwe ngesendlalelo esengeziwe sikapende ngaphandle, okusiza kokubili ikhishi libe nobuhle obuphakeme futhi kusize ukukhawulela imihuzuko ngesikhathi sokusetshenziswa.
I i-grill yamalahle Lokhu kusebenzisa amalahle abaswe esitsheni esinesivalo. Ngakho-ke, ungaqiniseka ukuthi ukudla kwakho ngeke kubhenywe lapho ubhaka, uqinisekisa ukuthi ubumnandi nephunga lemvelo lomkhiqizo lisagcinwa.
Ngaphezu kwalokho, ikhishi lifakwe nethreyi yokubamba amafutha namanzi aphuma ngesikhathi sokubhaka, okuyinhlanzeko futhi eqinisekisa ukuthi akukho ntuthu namagesi ayingozi, aphephile empilweni yomsebenzisi futhi anobungani nendawo ezungezile. Isitofu siphinde sakhiwe saba nezinyawo ezi-4 ezivimbela ukushelela, okukuvumela ukuthi usisebenzise kalula.
Kodwa-ke, igrill ye-OEM BNV-01 isenemikhawulo emincane embalwa njengokuthi ikhishi alishoni futhi isitofu sintekenteke impela, imilenze yasekhishini ayiqini kakhulu. Kodwa nge-grill yasekhaya ebiza ngaphansi kuka-200,000 VND, lokho lesi sitofu esingakwenza kufanele ukucabangele.
Intengo yesithenjwa: 154,000 VND
2. I-OEM BNT-01 . I-Round Charcoal Grill
I-OEM BNT-01 nayo iku-5 ephezulu i-grill yamalahle ethandwa futhi yaziswa namuhla. Lo mkhiqizo uthandwa ngabathengi baseVietnam kukho kokubili ukuklama nokusebenza kahle.
Ikakhulukazi, lo mkhiqizo unethoni encane emnyama kanye nedizayini yesimanjemanje, okulethela wena nomndeni wakho izoso efudumele nejabulisayo. Ikhishi nalo liminyene ngosayizi, ngakho-ke lilungele ukuhamba liye emuva naphambili ngesikhathi samapikiniki namapikiniki kude nasekhaya.
Ngaphandle kwalokho, lesi sitofu sinezingxenye ezingahlakazeka kalula. Ngakho-ke, lapho usebenzisa futhi uhlanza, ukugcina kulula kakhulu. Lokhu futhi kungenye yezinto ezenza le grill yaziswa futhi ikhethwe imindeni eminingi.
Naphezu kosayizi waso ohlangene, lesi sitofu se-OEM BNT-01 sisakuvumela ukuthi ucubungule futhi ubhake ukudla okuhlukahlukene ngesikhathi esisodwa, ngokunikela okulungiswayo okusekelwe esilinganisweni sezinga lokushisa. Izinga lokudla ngemva kokubhaka nalo limnandi kakhulu futhi liyakhanga.
Kodwa-ke, le modeli ye-grill iphinde ibe nokubi okuncane okumbalwa okufanele ukucabangele lapho ukhetha ukuthenga. Ngokucacile, lesi sitofu sine-lever yokulungisa okunzima ukuyisebenzisa. Ngaphandle kwalokho, isibambo se-grill asifakwe ungqimba olukwazi ukumelana nokushisa. Lokhu akulungile ngesikhathi sokubhaka, okungase kubangele ukusha kumsebenzisi uma unganakile.
Intengo yesithenjwa: 100,000 VND
3. Najico grill BN300
I-Najico BN300 iyimodeli ye-grill eyakhiwe ngokuya ngemigqa yezobuchwepheshe ye-Federal Republic of Germany futhi ihlangabezana nezindinganiso zaseYurophu ze-DEKRA-GS. Lo mkhiqizo une-grill kanye nethreyi ekhombisa ukushisa nezinye izingxenye ezenziwe ngensimbi engagqwali yekhwalithi ephezulu. Ingaphandle lesitofu lenziwe ngensimbi ekwazi ukumelana nokushisa futhi lipendwe nge-electrostatic, ngakho lihlala isikhathi eside, kulula ukulihlanza futhi lihle.
Mayelana nomklamo, lo mkhiqizo ulungile futhi ucocekile, uqinisekile. Ngakho-ke, ungayisebenzisa ngokunethezeka ngaphakathi nangaphandle, ungakwazi ukuyithwala kalula ohambweni, emapikinikini, njll.
Umshini wokushisa isitofu ubuye uklanywe ngesivalo, esiza ukuvimbela ukudla ukuthi kungabhenywa lapho kubhaka, ukuqinisekisa ukuthi izitsha ezibhakiwe zihlale zigcina ubumnandi bazo kanye nephunga lesici. Ikhishi libuye lifakwe ithreyi ehlukile esetshenziselwa ukubamba amafutha namanzi agelezayo, ngakho-ke iphephe kakhulu futhi ihlanzekile.
Ikakhulukazi, i- i-grill yamalahle Lokhu kuklanywe ngethreyi ebonisa ukushisa enjenge-parabolic, esiza ukukhulisa ukushisa ukuze kugxile ku-grill, okusiza ukonga amalahle engeziwe kuyilapho kuqinisekiswa ukuthi abasebenzisi abahlezi bezungeza abashisi. Akukhona lokho kuphela, ikhishi liphinde lenzelwe ukuvumela abasebenzisi ukuthi balungise izinga lokushisa ngokuvumelana nezidingo zohlobo ngalunye lokudla, okwenza ukudla kusha futhi kunambitheke.
Ngaphandle kwalezi zinzuzo ezingenhla, lolu hlobo lwe-grill lubuye lube nokungalungi okuncane okunzima kakhulu. Lokhu futhi kuyisithiyo ekunyakazeni nasekusebenziseni ikhishi ngesikhathi samapikiniki, ukuhamba…
Intengo yesithenjwa: 626,000 VND
4. Prota P016
I-Prota P016 iwumkhiqizo we-grill owenziwe eVietnam ngekhwalithi ephezulu yensimbi engagqwali, esiza ukuphatha ukushisa kahle futhi ihlala isikhathi eside. Ngalesi sitofu, ukudla kwakho ngemva kokubhaka kusazogcina ukunambitheka okungokwemvelo, ukusha kanye nombala wokudla ngakunye.
Le grill inosayizi ohlangene kahle, ngakho-ke kulula kakhulu ukuyibeka etafuleni lephathi noma ukuyisebenzisa phakathi nohambo, amapikiniki nomndeni nabangane. Isitofu siphinde sakhiwe ngendlela ye-tripod enemilenze emi-3, ukuze sikwazi ukuma siqine.
Enye inzuzo yale prota P016 charcoal grill ukuthi ikhishi lakhiwe ngeyunithi yokubhaka eziqukethwe yona kanye neshalofu elinezimbobo eziningi eziyindilinga. Lokhu kuzosiza ukugcina uthuli lwamalahle lungaphephuki, kugcine indawo ezungezile ihlanzekile futhi kuqinisekise impilo nokuphepha kwawo wonke umuntu ohlezi eduze.
Nokho, kukhona amanothi ambalwa amancane okudingeka ukwazi ngenkathi ukhetha ukuthenga nokusebenzisa lesi sitofu. Isitofu asiqinile futhi asiqinile kakhulu. Ngakho-ke, isitofu sizoba lula kakhulu ukusonteka uma siwe ngephutha noma sishaye kanzima.
5. Najico grill BN04
I-Najico BN04 iphinde yenziwe ngezinto zensimbi engagqwali yekhwalithi ephezulu enegobolondo langaphandle elenziwe ngensimbi engazweli ekushiseni kanye ne-powder-coated, iqinisekisa ukuthi umkhiqizo uqinile futhi kulula ukuwuhlanza ngesikhathi sokusetshenziswa. Leli khishi libuye libe nomklamo ohlanzekile, ofanele ukusetshenziswa etafuleni lokudlela futhi owenziwe emaphathini angaphandle.
Ngokufanayo ne-Najico BN300, le modeli ye-BN04 nayo inethreyi yokubonisa i-parabolic ene-burner enesivalo, ithreyi ehlukile yokugcina amafutha namanzi lapho ubhaka. Ngakho-ke, umkhiqizo waziswa kakhulu, wethenjwa futhi ukhethwa abantu abaningi.
Akukhona lokho kuphela, lesi sitofu sifakwe nenkinobho yokulawula izinga lokushisa emzimbeni, okukuvumela ukuthi wenze ngokwezifiso izinga lokushisa kwesitsha ngasinye sokubhaka esihlukile. Le modeli nayo ayikhiqizi intuthu, ngakho-ke ihambisana nemvelo futhi iphephile kubasebenzisi.
Intengo yesithenjwa: 600,000 VND
Nawa amamodeli angu-5 aphezulu i-grill yamalahle ethandwa kakhulu namuhla. Ngalezi zitofu, uzoba namaphathi e-barbecue akhangayo, athokozisayo futhi amnandi nomndeni wakho. Ngakho-ke uma udinga ukukhetha ukuthenga i-grill ekhaya futhi uyisebenzise ngezikhathi zohambo nepikiniki, ungawazibi amasampula emikhiqizo emi-5 ngenhla.
Xem Thêm Bento là gì? Các loại bento | Muasalebang